थाहा खबर: हातैले धागो कात्छन् कोहलपुरका दलित महिला, आम्दानी नाम मात्रको
हातैले धागो कात्छन् कोहलपुरका दलित महिला, आम्दानी नाम मात्रको
बाँके : कोहलपुर नगरपालिका–१, कौशिलानगरकी शोभा विक दिनभर भेडाको ऊनबाट धागो बनाउँछिन्। धेरै मेहनत गरे पनि उनले दिनमा एक किलो भन्दा बढी ऊनको धागो बनाउन सक्दिनन्। एक किलो धागो बनाएबापत उनले जम्मा १ सय ५० रुपैयाँ पाउँछिन्।
रोजगारीको अन्य विकल्प नभएपछि यहाँका दलित परिवारका महिलाले न्युन पारिश्रमिक लिएर ऊनी धागो कातेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। यहाँका महिलाले भेडाको ऊनको धागो हातले कातेर जीवन धान्दै आएको विक बताउँछिन्। एक केजी ऊनबाट धागो बनाउन २ दिनसम्म लाग्ने उनले बताइन्। ‘फुर्सदको समयमा धागो कात्छौं। समय खेर फाल्नुभन्दा अलिअलि आम्दानी भएकै राम्रो’, उनले भनिन् ।
करिब ६ वर्षदेखि भेडाको ऊनको धागो काटेर जीवन गुजारा गर्दै आएका यी महिलाले अहिलेसम्म तालिम पाएका छैनन्। गत वर्ष घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट थारु हस्तकलामा आधारित ढकिया बुनाइ तालिम पाएका उनीहरूका लागि उक्त तालिम फलदायी भएन।
बरु आफूहरुले गर्दै आएको ऊनको धागो कात्ने सीपमा आधारित तालिम दिन माग गरेका छन्। ‘ऊनको धागो कात्ने मेसिन पाएको भए एकदिनमा धेरै रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिन्थ्याे, हामीलाई अरु तालिमभन्दा ऊनको धागो कात्ने सीप र औजार जरुरी छ,’ कौशिलानगरकी रत्नमोती परियारले भनिन्।
ऊनको धागो कात्ने मेसिन भए दिनमा १०\_१२ किलो धागो काट्न सकिने उनले जानकारी दिइन्। ‘दिनमा ५ किलो मात्र धागो कात्न सके दैनिक ७–८ सय रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्।
काठमाडौंका व्यापारीले भेडाको ऊन गाउँसम्मै पुर्‍याउने गरेका छन्। एक पटकमा १९–२० क्वीन्टल ऊन गाउँमा आउने गरेको छ। ‘पारिश्रमिक थोरै पाए पनि नियमित रूपमा काम पाइने र फुर्सदको सदुपयोग हुने भएकोले चित्त बुझाएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्। बाँकेको महादेवपुरी, चिसापानी, नौवस्ता, बनकटवा र कचनापुरमा पनि काठमाडौंका व्यापारीले ऊन ल्याइदिने गरेका छन्। सस्तो पारिश्रमिक दिएर ऊनको धागो काट्ने पाइने भएकोले व्यापारी यता केन्द्रित भएको स्थानीयको भनाइ छ।
डा. देवकोटालाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगे उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानसेनापतिसम्म, फोटो
काठमाडौं : पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटालाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले श्रद्धाञ्जली द...
राजमार्ग बिक्री प्रकरणः बेच्ने र किन्ने पक्राउपछि नापी सर्वेक्षक पनि प्रहरी नियन्त्रणमा
उदयपुरः राजमार्गको जग्गा किन्ने-बेच्ने दुवै पक्राउ परेपछि थप अनुसन्धनको लागि नापी कार्यालय उदयपुरका सर्वेक्षक शिवचन्द्र ठाकुर पनि पक्राउ पर...